The Equalizer (2014) | MM Movie Store
ဂယျရီ ဟာ အထပျသားစကျရုံတဈခုမှာ နစေ့ားအလုပျသမား တဈယောကျအဖွဈ လုပျကိုငျပီးးဘဝကို အေးဆေးတညျငွိမျစှာ ဖွတျသနျးနသေူတဈဦးပါ..။နောကျပီး သူ့ဟာ သူမြားအပျေါကူညီလိုတဲ့ စိတျနဲ့,အမွဲတမျး အကောငျးမွငျပီး စိတျဓာတျကနြတေဲ့ လူတှကေို အားပေးတကျတဲ့ လူဖွဈလို့ ပတျဝနျးကငျြကလူတှကေလဲဂယျရီ ကို လေးစားခဈြခငျကွပါတယျ..။
အေးဆေးနတေကျတဲ့ ဂယျရီတဈယောကျ.. တဈနေ့.!!သူထိုငျသောကျနကြေ ကျောဖီဆိုငျလေးမှာ ထိုငျသောကျနရေငျး….”အလီဇာ” ဆိုတဲ့ ပွညျ့တနျဆာမလေး နဲ့ခငျမိပါတယျ..။ ဂယျရီဟာ အမွဲတမျးစိတျညဈနပေီးးစိတျဓာတျကနြတေဲ့ ‘အလီဇာ”ကို အားပေးရငျးလေးလေးစားစား ဆကျဆံရငျး ပိုရငျးနှီးမိပါတယျ..။
ဒီလိုနဲ့..!! တဈရကျမှာ…” အလီဇာ” တဈယောကျသလေောကျအောငျ အရိုကျခံထားရပီးး ဆေးရုံမှာရောကျနတေယျလို့ သတငျးကွားတေျာ့ ဂယျရီဟာဆေးရုံထိလိုကျသှားပီး ‘အလီဇာ’ ရဲ့ နောကျကွောငျးကိုစုံစမျးကွညျ့တဲ့ အခါ…အလီဇာ ဟာ..ပွညျ့တနျဆာအလုပျကိုမလုပျခငျြပဲလုပျနရေပီး ရုရှားမာဖီးယားဂိုဏျးတှေ (ဖာခေါငျးဂိုဏျး) နဲ့ ပတျသတျနပေါတယျ..။
ဒါကွောငျ့ဂယျရီ ဟာ..အလီဇာ့ ကို လှတျမွောကျပေးဖို့,ပွညျ့တနျဆာဘဝကနေ ထှကျသှားခှငျ့ပေးဖို့ အတှကျရုရှားဂိုဏျးခေါငျဆောငျကို ငှပေေးပီး သှားရောကျငွိနှိုငျးခဲ့ပါတယျ..။ ဒါပမေယျ့ ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျက လကျမခံတာကွောငျ့ ဂယျရီဟာ.. ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျ နဲ့ တပညျ့၅ယောကျကို စက်ကနျ့ ၃၀အတှငျးမှာ သတျပဈလိုကျပါတယျ..။
(သတျတဲ့အခနျးက ကြှတျဆငျ)ဒါကွောငျ့တဈခွား ရုရှားမာဖီးယားဂိုဏျး တှကေလဲ..သူ့လူတှကေို သတျသှားတဲ့ ဂယျရီကို လိုကျရှာပီးပွနျသတျဖို့အတှကျ ကွေးစားလူသတျသမားတဈဦးကို ငှါးရမျးလိုကျပါတယျ..။ဂယျရီ..တဈယောကျ..!!လူဆိုးဂိုဏျးတှနေဲ့ ဘယျလိုရငျဆိုငျရမလဲ..??ကွေးစားလူသတျသမားနဲ့ရော ဘယျလိုရငျဆိုငျရမလဲ..??
နောကျပီး..!! လူ၅ယောကျကို စက်ကနျ့ ၃၀အတှငျးသတျနိုငျခဲ့တဲ့ ဂယျရီ့ ရဲ့ နောကျကွောငျးရာဇဝငျ, ဘဝအမှနျက ဘယျလိုပုံစံလဲ..?? ဆိုတာကိုတေျာ့ဒီရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလတျရှုစားကွပါ..။ဒီကားဟာ Film Awards ဆုတှေ တဈသီကွီးဆှတျခူးရရှိထားပါတယျ..။
ဒီရုပျရှငျမှာ ဂယျရီအဖွဈ မငျးသားကွီး #DenzelWashington က ကွမျးကွမျးတမျးတမျးနဲ့ ပီပွငျစှာ..သရုပျဆောငျထားပီးး, #Training Dayရုပျရှငျနဲ့ကမ်ဘာကြျောခဲ့တဲ့ ဒါရိုကျတာကွီး #Antoine_Fuqua ကဒီရုပျရှငျကို ရိုကျကူးထားပါတယျ..။
တဈကားလုံး စှဲဆောငျမှုအပွညျ့နဲ့ကောငျးမှနျသသေပျလှတဲ့ အကျရှငျခနျးတှကွေောငျ့သငျ့ကို အစ ကနေ အဆုံးထိ ဆှဲချေါသှားပါလိမျ့မယျ..။John Wick နဲ့ Criminal လို ဇာတျကားမြိုးတှကေို ကွိုကျနှဈသကျတယျဆိုရငျ..သငျ့အတှကျ ဒီရုပျရှငျဟာ..တကယျ့ ”ရှေ” ပါပဲ..။
ဂယ်ရီ ဟာ အထပ်သားစက်ရုံတစ်ခုမှာ နေ့စားအလုပ်သမား တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ပီးးဘဝကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ဦးပါ..။နောက်ပီး သူ့ဟာ သူများအပေါ်ကူညီလိုတဲ့ စိတ်နဲ့,အမြဲတမ်း အကောင်းမြင်ပီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ လူတွေကို အားပေးတက်တဲ့ လူဖြစ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလဲဂယ်ရီ ကို လေးစားချစ်ခင်ကြပါတယ်..။
အေးဆေးနေတက်တဲ့ ဂယ်ရီတစ်ယောက်.. တစ်နေ့.!!သူထိုင်သောက်နေကျ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ထိုင်သောက်နေရင်း….”အလီဇာ” ဆိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမလေး နဲ့ခင်မိပါတယ်..။ ဂယ်ရီဟာ အမြဲတမ်းစိတ်ညစ်နေပီးးစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ‘အလီဇာ”ကို အားပေးရင်းလေးလေးစားစား ဆက်ဆံရင်း ပိုရင်းနှီးမိပါတယ်..။
ဒီလိုနဲ့..!! တစ်ရက်မှာ…” အလီဇာ” တစ်ယောက်သေလောက်အောင် အရိုက်ခံထားရပီးး ဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်လို့ သတင်းကြားတော့် ဂယ်ရီဟာဆေးရုံထိလိုက်သွားပီး ‘အလီဇာ’ ရဲ့ နောက်ကြောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့ အခါ…အလီဇာ ဟာ..ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ပဲလုပ်နေရပီး ရုရှားမာဖီးယားဂိုဏ်းတွေ (ဖာခေါင်းဂိုဏ်း) နဲ့ ပတ်သတ်နေပါတယ်..။
ဒါကြောင့်ဂယ်ရီ ဟာ..အလီဇာ့ ကို လွတ်မြောက်ပေးဖို့,ပြည့်တန်ဆာဘဝကနေ ထွက်သွားခွင့်ပေးဖို့ အတွက်ရုရှားဂိုဏ်းခေါင်ဆောင်ကို ငွေပေးပီး သွားရောက်ငြိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်က လက်မခံတာကြောင့် ဂယ်ရီဟာ.. ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် နဲ့ တပည့်၅ယောက်ကို စက္ကန့် ၃၀အတွင်းမှာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..။
(သတ်တဲ့အခန်းက ကျွတ်ဆင်)ဒါကြောင့်တစ်ခြား ရုရှားမာဖီးယားဂိုဏ်း တွေကလဲ..သူ့လူတွေကို သတ်သွားတဲ့ ဂယ်ရီကို လိုက်ရှာပီးပြန်သတ်ဖို့အတွက် ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ဦးကို ငှါးရမ်းလိုက်ပါတယ်..။ဂယ်ရီ..တစ်ယောက်..!!လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ..??ကြေးစားလူသတ်သမားနဲ့ရော ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ..??
နောက်ပီး..!! လူ၅ယောက်ကို စက္ကန့် ၃၀အတွင်းသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဂယ်ရီ့ ရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်, ဘဝအမှန်က ဘယ်လိုပုံစံလဲ..?? ဆိုတာကိုတော့်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လတ်ရှုစားကြပါ..။ဒီကားဟာ Film Awards ဆုတွေ တစ်သီကြီးဆွတ်ခူးရရှိထားပါတယ်..။
ဒီရုပ်ရှင်မှာ ဂယ်ရီအဖြစ် မင်းသားကြီး #DenzelWashington က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ပီပြင်စွာ..သရုပ်ဆောင်ထားပီးး, #Training Dayရုပ်ရှင်နဲ့ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး #Antoine_Fuqua ကဒီရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးထားပါတယ်..။
တစ်ကားလုံး စွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ကောင်းမွန်သေသပ်လှတဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေကြောင့်သင့်ကို အစ ကနေ အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်..။John Wick နဲ့ Criminal လို ဇာတ်ကားမျိုးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်..သင့်အတွက် ဒီရုပ်ရှင်ဟာ..တကယ့် ”ရွှေ” ပါပဲ..။